2 TÓNER COMPATIBLES Q2612A
> TINTA / TÓNER >HP>TÓNER >2 TÓNER COMPATIBLES Q2612A
2 TÓNER COMPATIBLES...
Pack compuesto por dos tóner...
Referencia: PACK Q2612AX2
Pack compuesto por dos tóner compatibles Q2612A con capacidad para 2.000 páginas.
Compatible con: LaserJet 1010 LaserJet 1012 LaserJet 1015 LaserJet 1018 LaserJet 1020 LaserJet 1022 LaserJet 1022N LaserJet 1022NW LaserJet 1028 LaserJet 108SE LaserJet 3015 LaserJet 3020 LaserJet 3030 LaserJet 3050 LaserJet 3052 LaserJet 3055 LaserJet M 1005 LaserJet M 1005MFP LaserJet M 1300MFP LaserJet M 1319MFP LBP 2900 LBP 2900B LBP 3000 MF 4010 MF 4120 MF 4140 MF 4150 MF 4270 MF 4320D MF 4330D MF 4340D MF 4350D MF 4370DN MF 4380DN MF 4660PL MF 4690PL FAX L 100 FAX L 120 FAX L 140 FAX L 160 MF 4270 PC D440 PC D450 MF 4150
2 TÓNER COMPATIBLES Q2612A <p><strong>Compatible con:</strong> LaserJet 1010 LaserJet 1012 LaserJet 1015 LaserJet 1018 LaserJet 1020 LaserJet 1022 LaserJet 1022N LaserJet 1022NW LaserJet 1028 LaserJet 108SE LaserJet 3015 LaserJet 3020 LaserJet 3030 LaserJet 3050 LaserJet 3052 LaserJet 3055 LaserJet M 1005 LaserJet M 1005MFP LaserJet M 1300MFP LaserJet M 1319MFP <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">LBP 2900</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">LBP 2900B</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">LBP 3000</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4010</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4120</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4140 MF 4150</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4270</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4320D</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4330D</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4340D</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4350D</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4370DN</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4380DN</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4660PL</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4690PL</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">FAX L 100</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">FAX L 120</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">FAX L 140</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">FAX L 160</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4270</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">PC D440</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">PC D450</a> <a style="color: #0000ee; text-decoration: underline;">MF 4150</a></p>